RASMI: Aduunyo Lagu Kala Tagay-Xadiga Mushaarka Kooxaha La Liga Ee Sanadkan Oo Lagu Dhawaaqay Iyo Arin Layaableh Oo Ka Soo Baxday. - Gool24.Net
RASMI: Aduunyo Lagu Kala Tagay-Xadiga Mushaarka Kooxaha La Liga Ee Sanadkan Oo Lagu Dhawaaqay Iyo Arin Layaableh Oo Ka Soo Baxday.
Waxaa si rasmi ah loo shaaciyay heerka mushaar bixinta kooxaha Spain iyada oo kooxda difaacanaysa horyaalka La Liga ee Barca ay noqotay kooxda ugu mushaarka saraysa dhamaan 20 ka kooxood ee horyaalka heerka kowaad ku tartamaya.
Barcelona ayaa sare u qaaday mushaarkii kooxdeeda ee sanadkii la soo dhaafay tiro dhan €38.52 milyan yuro waxayna Real Madrid mushaar bixinteeda ka saraysaa 30 milyan yuro.
Kooxda Camp Nou ka dhisan ayaa sanadkii hore mushaar ahaan u bixinaysay lacag dhan €632.9 milyan yuro laakiin sida la shaaciyay waxay sanadkan mushaarka kooxda Barcelona uu noqday €671.42 milyan yuro iyada oo ah kooxda ugu mushaarka qaalisan.
Marka laga yimaadl kooxda Villarreal, dhamaan 19 ka kooxood ee kale ayaa dhamaantood sare u qaaday mushaarkii kooxahooda iyada oo Barcelona ay tahay kooxda inta ugu badan oo €38.52 milyan yuro ah sanadkan ku kordhisay mushaarkii ay sanadkii hore bixisay.
Mushaarka ciyaartoyda kooxda Real Madrid ayaa lagu sheegay €641 milyan yuro laakiin inkasta oo ay ka mushaar hooseeyaan Barcelona haddana mushaarkii Madrid ee sanadkii hore ayaa lagu kordhiyay €74.55 milyan yuro iyada oo ay sabab u yihiin saxiiyada kooxda ku soo kordhay.
Kooxd Atletico Madrid ayaa sanadkan mushaar ahaan u bixinaysa €384.5 milyan yuro waxayna sanadkii hore mushaar ahaan u bixiyeen €322.92m.
Kooxda Villarreal ayaa ah kooxda kaliya ee dhintay ama hoos u dhigtay mushaarkii kooxdeeda ee sanadkii hore waxayna Villareal hoos ugu soo dhacday €539 milyan yuro oo mushaar ah halka ay sanadkii hore ka bixiyeen €782 milyan yuro.
Kooxaha Granada, Real Valladolid iyo Mallorca ayaa mushaar ahaan u bixinaya (€35.46m), (€32.03m) iyo (€29.96m) sida ay u kala horeeyaan.
Arinta layaabka leh ayaa ah in kooxaha ugu mushaarka hooseeya horyaalka La Liga ee Granada, Valladolid iyo Mollorca in ay sanadkan bixinayaan mushaar ka hooseeya inta ay Barcelona mushaarkii sanadkii hore ee kooxdeeda ku kordhisay oo ah €38.52 milyan yuro.
Waxaa muuqata kala sarayn dhaqaale oo waali ah iyada oo kooxaha waa wayn ee Spain iyo kooxaha yar yar ayna lacag isku mid ah ka helin xuquuqda baahinta tooska ah ee TV-yada si la mid ah horyalaada kale ee Yurub.